လိင်တူချင်း ချစ်သူများအကြောင်း သိကောင်းစရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » လိင်တူချင်း ချစ်သူများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
လိင်တူချင်း ချစ်သူများအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Posted by Phyo on Nov 4, 2010 in Drama, Essays.., Education, Gay/Lesbian | 37 comments
Gay and Lesbian General Knowledge
လိင်တူချင်း စုံမက်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
လိင်တူချင်းစုံမက်တယ်ဆိုတာက ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကို စိတ်မ၀င်စားဘဲ ယောက်ျားလေးက ယောက်ျားလေးကိုပဲ မျက်စိကျတာ၊ မိန်းကလေးက မိန်းကလေးချင်းပဲ မျက်စိကျတာမျိုးကို ခေါ်တာပါ သား။ အရပ်သုံးစကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ကွာ လိင်တူချင်းမှ စုံမက်တဲ့ ယောက်ျားကို ‘မိန်းမလျာ’၊ ‘အခြောက်’၊ ‘ဂန်ဒူး’၊ ‘ဂျီပုန်း’၊ ‘ဂျယ်’ စသဖြင့် အမျိုးစုံခေါ်တတ်ကြတယ်။
လိင်တူချင်းမှ စုံမက်တဲ့ မိန်းကလေးကိုကျတော့ ‘ယောက်ျားလျာ’ လို့ အခေါ်များပြီး အခြားဘန်းစကားတွေကကျတော့ နည်းနည်းရိုင်းလို့ သားတင်မက အများပါ ဖတ်နေတဲ့ စာထဲမှာ ထည့်မရေးပါရစေနဲ့တော့၊ တကယ်တော့ သားရယ် လောကမှာ ယောက်ျားလျာ၊ မိန်းမလျာတွေဟာ လူတောမတိုးလှတဲ့ လူတန်းစားတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
အများစုအနေနဲ့ သူတို့ကို မူမမှန်သူများ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဖောက်ပြန်နေသူများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြလေတာကိုး။ သတ်မှတ်ကြဆို အဲသလိုဖြစ်နေတာကလည်း လူနည်းစုသာဖြစ်နေတာက အဓိကပဲလို့ ပညာရှင်တွေ၊ သုတေသီတွေက ဆိုကြတယ်။ အများညီရင် ‘ဤ’ ကို ‘ကျွဲ’ ဖတ်လို့ ရတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့ သားရယ်။ သူတို့တွေမှာက အများနဲ့မညီတော့ ‘ဤ’ ကို ‘ကျွဲ’ လို့ပဲ မြင်နေတဲ့ သဘောပဲပေါ့လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သုတေသနများအရ ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းလုံးမှာ ယောက်ျားဆယ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်၊ မိန်းမဆယ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်လောက်ကတော့ လိင်တူချင်းစုံမက်တတ်ကြတယ်လို့ ဆိုထားတယ် သားရဲ့။
ဒါပေမယ့် လိင်စိတ်ဆိုတဲ့အမျိုးက မရှင်းလှဘူးကွ။ သူ့ဘာသာ လိင်တူချင်းပဲ စုံမက်စုံမက်၊ လိင်ကွဲမှပဲ ကြိုက်ကြိုက်၊ လိင်စိတ်ဆိုတာကိုက ပညာရှင်တွေတောင် ကျနသေချာ မရှင်းနိုင်သေးတဲ့ လူ့အငုံ့စိတ်တစ်မျိုးပဲ။ လိင်ကွဲချင်းကြိုက်တတ်သူ ယောက်ျားမိန်းမများပင်လျှင် အမှန်တိုင်းဖွင့်ဟ၀န်ခံရဲတဲ့သတ္တိမျိုး မရှိရင်သာနေလိမ့်မယ်။ ဘ၀တစ်သက်တာမှာတော့ ငယ်နုစဉ်အခါတုန်းကဖြစ်ဖြစ် လိင်တူချင်းသာယာမှု ရှာဖူးချင်ရှာဖူးခဲ့နိုင်ပါတယ်သား။
ယနေ့ကာလမှာ တချို့ပညာရှင်တွေက လိင်စိတ်ကို အသားပေးလွန်းတယ်လို့ အဝေဖန်ခံရတဲ့ စိတ်ပညာ ဖခင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်လေတဲ့ ပါမောက္ခ ဆစ်ဂမန်(ထ်) ဖရွိုက်(ထဲ)ကတော့ လူရယ်လို့ မွေးလာကတည်းက ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်စိတ်နှစ်မျိုးစလုံး ပါရှိတယ်လို့ဆိုသကွ။ ဆိုလိုတာက လိင်ကွဲကိုလည်း သာယာတယ်၊ လိင်တူကိုလည်း သာယာတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးက သူ့အဆိုအရ မွေးရာပါတဲ့။ ဒါပေမယ့် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ တစ်မျိုးကသာ လွှမ်းမိုးသွားတယ်ပေါ့ကွယ်။
ဖေဖေတို့မျက်စိရှေ့မှာတင် အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီး ကလေးတွေမွေးထားတဲ့ ကျားကျားလျားလျား ယောက်ျားကြီး တချို့ဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ လိင်တူချင်းမှ ကြိုက်တတ်သူများအဖြစ် ဗြောင်ကျကျ ၀န်ခံတာတွေ ဖေဖေတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ အလားတူပဲ၊ မိန်းမနဲ့ ရံဖန်ရံခါ ပတ်သက်တတ်တဲ့ မိန်းမလျာတွေ၊ ယောက်ျားနဲ့ ရံဖန်ရံခါ ပတ်သက်တတ်တဲ့ ယောက်ျားလျာတွေလည်း သည်လောကမှာ အမှန်တကယ်ရှိပါတယ်။
အဲတော့ကာ ပွေလီလှတဲ့ လူ့ဘောင်လောကမှာ ရာနှုန်းပြည့်လိင်တူချင်းမှ စုံမက်သူ၊ ရာနှုန်းပြည့် လိင်ကွဲကိုမှ တပ်မက်သူရယ်လို့ အပြတ်အသား ရှိနေတာမျိုး အင်မတိ အင်မတန်ကို ရှာပါးလှတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင် အများစုက ဆိုထားပါတယ် သားလေးရေ့။ အဲတော့ကွာ၊ လိင်စိတ်ဆိုတာ မွေးကတည်းက ကိုယ်ထဲမှာ တစ်သမတ်တည်း တည်နေအောင် ထည့်ပေးလိုက်လို့ရတဲ့ စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသားရဲ့။ စိတ်တို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်း တဖြည်းဖြည်းချင်း ရင့်မာလာတဲ့သဘော၊ မခိုင်ကျည်တဲ့သဘော၊ ပြောင်းလဲ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့သဘောကို ဆောင်နေတယ်။
လူပျိုပေါက်စမှာ တွေဝေယိမ်းယိုင်မှုများနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုများ
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် အလယ်ပိုင်းလို့ဆိုအပ်တဲ့ ၁၄-၁၅-၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ လိင်စိတ်က စတင်နိုးကြားလာပါတယ်။ သည်အရွယ်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း အတော်လေး ပြောင်းလဲ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့မှကိုး။ ဒါပေမယ့် လူအတော်များများအတွက် သည်အချိန်ဟာ အတော့်ကို စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းနေသလို တွေတွေဝေေ၀လည်း ဖြစ်နေရတတ်တယ် သားရဲ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိင်စိတ်ဘက်ကို ဦးတည်နေမှန်း အပြတ်အသား မဝေခွဲနိုင်လောက်အောင် ကိုယ်ခန္ဓာကရော၊ စိတ်အခြေအနေကပါ တအားကြီး ပြောင်းလဲနေလို့ပါပဲကွယ်။ သည်အရွယ်မှာ ယောက်ျားလေးချင်း ရေချိုးခန်းထဲမှာ ကိုယ်လုံးတီးဆုံမိတာနဲ့တင် လိင်စိတ်နိုးကြားနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုနားလည်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ကုန်တယ်။ အမှန်တော့ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေးဆိုတဲ့ လိင်နှစ်မျိုးစလုံးဟာ လူပျိုပေါက်စ၊ အပျိုပေါက်စမှာ အဲသလိုတွေဖြစ်တတ်တာဟာ သဘာဝပဲ သားရဲ့။ ကိုယ်နဲ့ လိင်ချင်းတူသူများကို ၀တ်လစ်စလစ်မြင်ရတဲ့အခါ ငယ်နုသေးတဲ့အရွယ်မှာ လိင်စိတ်နိုးကြားလာတာဟာ တကယ်တော့ ဘာဆိုဘာမှ အရေးမကြီးလှပါဘူး။
အဲသလို ဖြစ်သွားလို့လည်း မိမိကိုယ်ကို လိင်တူချင်းမှစုံမက်သူဖြစ်နေပြီလို့ သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်သေးဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ကိုယ်နဲ့လိင်တူ သူငယ်ချင်းကို ချစ်ခင်တွယ်တာလွန်းမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိင်တူချင်း စုံမက်နေပြီလားလို့ သံသယ၀င်စရာ မလိုဘူးနော် သား။ သည်အရွယ်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ စက်ယန္ဒယားကြီးက သူ့ဘာသာ အလိုလို ဖွံ့ဖြိုး နိုးထ လှုပ်ရှားနေတာပါ။
ဘာ အတွေ့အကြုံ၊ အသိအမြင်မှ ပီပီသသမရသေးခင်မှာ လိင်တူချင်း မြင်ရ၊ တွေ့ရ၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံရခြင်းများကြောင့် လိင်စိတ်နိုးကြားလာတာဟာလည်း ကိုယ်က အတင်းလိုက်ထိန်းချုပ်လို့ ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။ တစ်နည်းပြောရရင်ကွာ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါတဲ့ အခြေအနေကို မရောက်သေးဘဲ အရာရာကို စူးစမ်းနေတဲ့ ခန္ဓာရဲ့သဘော၊ စိတ်ရဲ့သဘောများကြောင့် သူ့အလိုလိုဖြစ်နေတာသက်သက်ပဲကွ။ ဒါလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ ကိုယ့်လိင်စိတ်ကဖြင့် ဘယ်ကဲ့သို့၊ ဘယ်ချမ်းသာလို့ သတ်မှတ်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ်မိနေရင် နည်းလမ်းလည်းမကျ၊ အဓိပ္ပါယ်လည်း မရှိပါဘူး သားရယ်။
လိင်တူချင်း ၀တ်လစ်စလစ် မြင်လိုက်ရချိန်မှာ ကိုယ့်ငယ်ပါ တင်းလာတာဟာလည်း ကိုယ်က လိုက်ထိန်းချုပ်နေလို့ ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး သားရဲ့။ အဲဒါကလည်း တကယ့်သဘာဝစစ်စစ်ပဲလေ၊ လူလားမြောက်စ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုသက်သက်ပါပဲ။ အလားတူပဲ၊ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေတဲ့အခါမှာ လိင်တူချင်းကို ထည့်စိတ်ကူးယဉ်မိရုံနဲ့လည်း ဒါကို လိင်တူချင်းစုံမက်တဲ့စိတ်လို့ အတိအလင်း သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ အဲဒီ့အခန်းမှာ ရေးပြခဲ့တုန်းကလိုပဲပေါ့ သားရာ၊ စိတ်ကူးဆိုတာ သူတစ်ပါး သိနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲတင် ကြိုက်သလို ကြိတ်ပြီး ယဉ်ချင်တိုင်း ယဉ်လို့ရတဲ့ အမျိုးမဟုတ်လား။
စိတ်ကူးယဉ်တယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ တကယ့်ကို တခြားစီပါ။ အထူးသဖြင့် လိင်စိတ်နဲ့စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အခါ ဇာတ်သိမ်းခါနီးမှာ လူတွေဟာ မဟုတ်တမ်းတရားတွေကို ပိုလို့တွေးတတ်ကြပါတယ်။ အဲသလိုအချိန်မှာ လိင်တူချင်းစုံမက်တယ်ဆိုတဲ့ မဟုတ်တမ်းတရားကြောင့် တချို့လူတွေမှာ ပိုလို့ စိတ်လှုပ်ရှားတတ်ကြတာမို့ အဲလိုမျိုး စိတ်ကူးမိသွားရုံနဲ့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိင်တူချင်းစုံမက်တဲ့စိတ်မျိုးရှိနေတယ်လို့ အပြတ်ပြောလိုက်လို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သား မှတ်ထား။
ငါများ မိန်းမလျာ ဖြစ်နေပြီလား။
လူပျိုပေါက်စမှာ လိင်ကိစ္စနဲ့ပက်သက်လို့ စိတ်ရှုပ်မိရသမျှထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိန်းမလျာဖြစ်နေပြီလားလို့ တွေးမိတာလည်းတစ်ပြဿနာပဲသားရဲ့။ အမှတ်လွဲနေတာတစ်ခုနဲ့ မိန်းမလျာတွေနဲ့ ပေါင်းရင် မိန်းမလျာ ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးပါ။ ဆိုလိုတာက မိန်းမလျာက ယောက်ျားစစ်စစ်တစ်ယောက်ကို မိန်းမလျာ ‘ဇာတ်သွင်း’ လို့ရတယ်လို့ ထင်တာပေါ့ကွာ။ မရပါဘူး။ မိန်းမလျာဖြစ်အောင်လည်း လုပ်ယူလို့လုံးလုံးမရပါဘူး။ တချို့က ထင်ကြတယ်၊ ယောက်ျားလေးတွေကို ကလေးဘ၀က မိန်းမလို ဆင်ပေး၊ ၀တ်ပေး၊ ပြင်ပေးလိုက်ရင် ကြီးလာတဲ့အခါ မိန်းမလျာ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့။ အဲဒါလည်း အတော် လွဲနေသကွ။ လွဲဆို အဲလိုမှ မဟုတ်ဘဲကိုး။ ဒါတင်မကသေးဘူး၊ မိန်းမလျာဖြစ်တာဟာ မျိုးရိုးလည်း မလိုက်တတ်ဘူး။ အဖေက လိင်တူချင်း စုံမက်သူဖြစ်နေတာနဲ့ သားလည်း သူ့လို လိုက်ဖြစ်မယ်လို့ ဘယ်သူမှ တတ်အပ်သေချာ မပြောနိုင်ဘူး။ မိန်းမလျာကို လူ့ဘောင်က အထင်အမြင်သေးတာ၊ ၀ိုင်းပယ်ထားတာ များကြောင့် ယောက်ျားလေးတွေခမျာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိန်းမလျာဖြစ်သွားမှာ အစိုးရိမ်လွန်နေတတ်ကြတယ် သားရဲ့။
စကားစပ်လို့ ပြောရရင် သားရယ်၊ သည် ‘သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့’ ကို သားနဲ့တကွ သားရဲ့ ရွယ်တူတွေအနေနဲ့ သိသင့်တာတွေကို အရင်းအတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန် သိရပြီး လမ်းမှား မရောက်ရစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သရဖူမှာ အခန်းဆက် ဖော်ပြနေတာ အတော်တောင်ကြာသွားပြီ။ သားသိတဲ့ အတိုင်း ဖေဖေ့ဆီကို ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်ကတည်းက စာဖတ်သူအမျိုးမျိုးက စာနဲ့ တစ်မျိုး၊ ဖုန်းနဲ့တစ်ဖုံ၊ လူကိုယ်တိုင်တစ်နည်း လာရောက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေခဲ့ကြတယ်။ သည် ‘သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့’ မတိုင်ခင်တုန်းကတော့ ဖေဖေ့ဆီကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာသူတွေက မိန်းမသား အများစု၊ ယောက်ျားဆိုတာ အင်မတိ အင်မတန်ရှားတယ်။ အခု သည်အခန်းဆက်ဆောင်းပါးနဲ့ ကျတော့မှပဲ ဖေဖေ့ဆီကို ဆက်သွယ်လာသူ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ယောက်ျားလေးအင်အား သိသိသာသာတိုးပွားလာတာ သားလေးအသိပဲ။ အထူးသဖြင့် သားတို့သာသာ လူငယ်လေးတွေနဲ့ လူလတ်တွေ။
ခမျာများမှာ ဘယ်ကတည်းက စိတ်သောက ရောက်နေရှာကြတယ်မသိဘူး။ ဖေဖေက အခုလိုတွေ ရေးတော့မှပဲ သူတို့မှာ ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ရမယ့်သူကို တွေ့သွားတော့တယ်။ သည်ကိစ္စကို လတ်တလောမှာ ဘယ်သူကမှ လူသိရှင်ကြား ချပြဆွေးနွေးနေတာ မဟုတ်တော့ အခက်သားလားကွယ်။ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း လေးငါးဆယ်လောက်တုန်းကတော့ ဆရာဝန်စာရေးဆရာတွေတင်မက ဆရာပီမိုးနင်း၊ ဆရာမဟာဆွေ၊ စာရေးဆရာ ဦးနုတို့က ရေးဖူးတယ်။ ဆရာမဟာဆွေ့စာအုပ်ဆိုလည်း ကြားတော့ ကြားဖူးတယ်။ မဖတ်ဖူးဘူး။ မနေ့တစ်နေ့ကမှ အင်တာနက်ထဲမှာ တွေ့တော့မှ ဖေဖေ့မှာ သဘောတွေကျလို့။ သူပြောတာတွေက ခေတ်တော့ မမီတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆရာကြီးဟာလည်း လိုအပ်ချက်တစ်ခုအရ ရေးသင့်ရေးထိုက်တာမို့ သူ့သိက္ခာကို မငဲ့ဘဲ ရေးသားထုတ်ဝေလိုက်တာ အတော် ထင်ရှားတယ်။ နေဦး၊ ပြောရင်းနဲ့ စကားက ဘေးချော်တော့မလိုဖြစ်နေတယ်။ အခုကာလမှာကျတော့ ဒါကို ချပြဆွေးနွေးတဲ့သူက မရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ဖေဖေတစ်ယောက်ပဲ ရေးသင့်တဲ့ကာလကြီး၊ အထူးသဖြင့် ကုရာနတ္ထိ ရောဂါဆိုးကြီးက စက္ကန့်မလပ် ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကာလကြီးလည်းဖြစ်နေ၊ ကိုယ့်မှာကလည်း လူပျိုပေါက်စ သားတစ်ယောက်ရှိနေလို့ စာနာစိတ်နဲ့ ချရေးနေတာ။
အဲလိုရေးလိုက်တော့မှ လာလိုက်တဲ့စာတွေ၊ ဆက်လိုက်တဲ့ ဖုန်းတွေ၊ လာတွေ့လိုက်ကြတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေ မနည်းဘူးဆိုတာ သားအမြင်ပဲလေ။ သည်အထဲမှာ အများစုက အခုသည်အခန်းမှာ ဖေဖေ ရေးပြနေသလို ငါများ မိန်းမလျာဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ရောက်လာကြတာတွေဖြစ်နေတော့ ဖေဖေလေ သည်အလုပ်ကို လုပ်မိသွားတဲ့အတွက် အင်မတန် ကြည်နူးမိရပါတယ်။ တကယ်တော့ သားရယ်။ မိန်းမလျာဖြစ်ဖို့ဆိုတာက ဘာသာတရားအရ ပြောရင် အတိတ်က ၀ဋ်ကျွေး တော်တော်ကြီးပါမှ ဖြစ်နိုင်တာမျိုးပါ။ စိတ်ပညာရှင်များနဲ့ ဇီဝကမ္မဗေဒအလိုအရတော့ ဦးနှောက်ထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဟိုမုန်းထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ဂလင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ အဲဒါတွေက လူလုပ်ယူတာမဟုတ်ဘဲ မွေးရာပါပဲလေ။ အဲသလိုမျိုးမို့ အလကားနေရင်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီး သောကရောက်နေဖို့ မလိုလှပါဘူးကွယ်။
ပုထုဇနော ဥမ္မတ္တကောလို့ ဘုရားဟောရှိတဲ့အတိုင်း လူတိုင်းမှာ စိတ်ရောဂါ တစ်မျိုးစီရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ့စိတ်ရောဂါထဲမှာ မိန်းမလျာကိုဆို လုံးလုံးကြည့်လို့မရတာလည်း တစ်မျိုးပါနေတယ်။ ဖေဖေ သည်လိုရေးလိုက်တော့ အဲသလို မိန်းမလျာတွေကို အခြောက်တိုက် စက်ဆုပ်ရွံမုန်းနေသူများက ဖေ့ဖေ့ကို သိပ်ကြည်လင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးထင်သကွ။ အမှန်တော့ သားရယ်၊ ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အစွန်းရောက်လွန်းနေရင် မူမှန်တဲ့ စိတ်လို့ခေါ်လို့ မရတော့ဘူး။ ဒါဟာ စိတ်မူမမှန်ခြင်းရဲ့ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်မျိုးပဲ။ လူမှန်ရင် မုန်းခြင်း၊ ချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားမှုကတော့ ရှိတတ်စမြဲပေါ့ကွာ။
ဒါပေမယ့် မုန်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့ ရန်လိုနေစရာ အကြောင်းမရှိသလို ချစ်တာတစ်ခုတည်းကြောင့်လည်း အပြစ်ဟူသမျှ မြူမှမထင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် အဲဒါ တရားလက်လွတ်တာပဲပေါ့ကွဲ့။ တစ်နည်းအားဖြင့် မူမှန်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ မဆိုနိုင်တော့ဘူးပေါ့ သားရယ်။ မူမှန်တဲ့စိတ်ဆိုတာက ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အစွန်းမရောက်အောင် ထိန်းနိုင်သိမ်းနိုင်တဲ့၊ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတဲ့စိတ်ပါ။ ‘ငါတို့ကတော့ဟေ့၊ သူ့ကိုချစ်တယ်၊ ချစ်လျှင်အကျိုးတဲ့၊ မြတ်နိုးတော့သဒ္ဒါကွ၊ အဲတော့ သူဘာလုပ်လုပ် ငါတို့အတွက်တော့ အကုန်လုံးကောင်းနေတာပဲ’ ဆိုတဲ့အစွန်း၊ ‘အို… သင်းက အလကားကောင်ပါကွာ၊ သူအကောင်းလုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်း ဟန်ပြပဲဖြစ်မှာပါ၊ စောင့်ကြည့်ပေါ့၊ အချိန်တန်ရင်ခွေးမြီးကောက်က ပြန်ကောက်မှာပါ’ ဆိုတဲ့အစွန်းတွေဟာ လူတိုင်းလိုလိုမှာ ရှိတတ်တယ်။ သွားမေးရင် အဲလိုလူမျိုးတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေလို့ ဆိုမယ့်သူတွေက ပါပေဦးမယ်။ တကယ်တော့ သားရော၊ ဖေဖေတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အဲဒီ့အစွန်းတွေကို ရှောင်ခိုင်းပါတယ်။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားတာဖြစ်နေသည့်တိုင် အသားလွတ် အယုံမခိုင်းဘဲ ကိုယ်တိုင်လေ့လာစူးစမ်းပြီး ယုံသင့်မှယုံဖို့ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က မြွတ်ကြားတော်မူခဲ့တာ သားကို ဖေဖေခဏခဏပြောပြဖူးတဲ့ ကာလမသုတ္တံဒေသနာထဲမှာ အထင်အရှား ပါနေတာပဲလေ။ သို့ပေမယ့် အများစုကတော့ တစ်ခုခုဆို၊ ကျားကျား မီးယပ်။ လှေနံဓားထစ်တွေပဲလျှောက်အော်ဖြစ်နေတာ များတယ်သားရဲ့။ အဲဒါကို ငါ့သား ဘယ်တော့မှ မဖြစ်စေနဲ့။ ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ သေချာ ပြန်စဉ်းစားဆင်ခြင်။ တစ်ခုခုကို ကိုယ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့် လက်မခံနိုင်တာလဲ။ အစွဲကြောင့်လား၊ တခြားပယောဂတစ်ခုခုကြောင့်လား။ ကိုယ်နဲ့သဘောမညီတိုင်း တပါးသူ မှားတယ်လို့ပြောရင် အဲလိုပြောသူရဲ့ စိတ်ဟာ မူမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အသိကို သားလေး မြဲမြဲစွဲစွဲ မှတ်ထားပါကွာ။
ပြောလက်စကို ပြန်ကောက်ရင်တော့ကွယ်၊ အဲသလို အစွဲတွေနဲ့ ပြောကြတဲ့အထဲမှာ ‘မိန်းမလျာဆိုရင် ခြေထောက်နဲ့တောင် ကန်လိုက်ချင်သေး’ ဆိုတာမျိုးကလည်း ထိပ်ဆုံးက ပါနေတတ်တယ်။ အမှန်တော့ အစွန်းမလွတ်တာပဲကွ။ တစ်ဖက်က ပြောရင်လည်း မိန်းမလျာဆိုတာမျိုးကို လူ့ဘောင်က ကြဉ်တင်တင်၊ ဖယ်တယ်တယ်လုပ်တတ်လေတော့ ကိုယ်မှ အဲသလိုမလုပ်မိပြန်ရင် ကိုယ့်ကိုလည်း ‘မလျာ’ စာရင်းထဲမှာ အသွင်းခံရမှာစိုးတာကြောင့်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ကိုယောက်ျားပီသလှပါတယ်။ ယောက်ျားစိတ်အပြည့်နဲ့ ရှိပါတယ်လို့ လူပုံအလယ်မှာ ထယ်ပြချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် အသံကုန်အော်နေမိတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်နေပြန်သေးတယ်။
တကယ်တော့ လူမှန်ရင် ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ျားဆို ယောက်ျားစိတ်ချည်းသက်သက်၊ မိန်းမဆို မိန်းမစိတ်ချည်းသက်သက်ရှိနေတဲ့လူရယ်လို့ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ ဒါ ဖေဖေ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်။ စိတ်ပညာရှင်များအားလုံး တညီတညွတ်တည်းဆိုထားတဲ့စကား။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ လူသာမန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ယောက်ျားစိတ်၊ မိန်းမစိတ် မျှနေမှဖြစ်တာ သားရဲ့။ အဲ…သည်နေရာမှာ ယောက်ျားစိတ်၊ မိန်းမစိတ်ဆိုတာ လိင်စိတ်တစ်ခုတည်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ။ အသန့်အပြန့်ကြိုက်တာ၊ လုပ်တာကိုင်တာ သပ်ရပ် သေချာတာ၊ ကြင်နာတာ၊ သဘောထား နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတာ၊ မျက်ရည်လွယ်တာ စတာမျိုးတွေကို မိန်းမစိတ်လို့ ယေဘုယျသတ်မှတ်လို့ ရပြီး တုံးတိုက်တိုက်၊ ကျားကိုက်ကိုက်လုပ်ချင်တာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထီမထင်တတ်တာ၊ ခွန်အားဗလကိုအားကိုးပြီး အနိုင်ယူချင်တာ၊ ခက်ထန်တာကို ယောက်ျားစိတ်ရယ်လို့ အကြမ်းဖျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ သည်စိတ်နှစ်စိတ်က ဒွန်တွဲနေပါတယ်။ ယောက်ျားတန်မဲ့ အလှအပကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားမျိုး၊ ကြွကြွရွရွလေး နေချင်တတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုး ရှိသလို မိန်းမတန်မဲ့နဲ့ ဖြစ်သလိုနေတတ်စားတတ်တဲ့ မိန်းမတွေလည်း ရိုက်သတ်လို့ မကုန်ပါဘူး။
သားကတော့ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဖေဖေတို့ လင်မယားကို ကြည့်တာနဲ့ကို သည်အချက်က သိပ်သိသာနေမှာပေါ့။ ဖေဖေနဲ့ သားမေမေက အစစပြောင်းပြန်တွေချည်းပဲလေ။ သားမေမေက ချဉ်ချဉ်၊ ငံငံ၊ စပ်စပ်ဆို စားကိုမစားတတ်ဘူး၊ အချဉ်ထုတ်ဆိုလည်း ဝေလာဝေး။ ဖေဖေကကျတော့ ရှောက်သီးသုပ်၊ ဆီးပြား၊ မရမ်းပေါင်းစသဖြင့် အကုန်ကြိုက်တာ သားအမြင်ပဲ။ သားမေမေက စိတ်မာတယ်၊ ဖေဖေ့စိတ်က ခပ်နုနု၊ ခပ်ပျော့ပျော့။ ဖေဖေက ဖေဖေ့ရုပ်ရည်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အင်မတန် ဂရုစိုက်တယ်၊ လှချင်တယ်။ သားမေမေက ဖေဖေ့လောက် လှချင်ပချင်စိတ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေက ကစုတ်ကဖက်နေ၊ ဖြစ်သလိုနေဖို့ ၀န်မလေးသလောက် သားမေမေက ကျပြန်တော့ သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်မှ ကြိုက်တတ်တယ်။ ဖေဖေက ပျော့စိပျော့စိနဲ့ ရက်စက်ပြီဟေ့ဆိုရင်လည်း ကမ်းကုန်အောင်ရက်စက်တတ်သလောက် သားမေမေက မာရေကျောရေနဲ့ ဘယ်တော့မှ စိတ်က မပြတ်တတ်ဘူး။
ကိုင်း … ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ၊ ကျားစိတ်၊ မစိတ်တွေ ရောနေကြပုံကို သားမြင်ပြီ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားဘသားဆိုတဲ့စိတ်မျိုး၊ ငါဟဲ့ ယောက်ျားဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးတွေနဲ့ကျတော့ အဲဒါမျိုးကိုတောင် လက်မခံချင်တော့ဘူး။ သနားလို့ လိုက်လျောတာမျိုးလုပ်မိရင်ကို အဲဒါယောက်ျားတန်မဲ့ ပျော့ညံ့တာလို့ အောက်မေ့ပြီး အလကားနေရင်း တင်းပြ၊ မာပြနေရတာကိုက အလုပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတတ်တယ်။ လက်သုပ်စုံတို့၊ လက်ဖက်သုတ်တို့ ကြိုက်ရင်ပဲ မိန်းမတွေမှ စားတဲ့အစာလို့ သတ်မှတ်ပြီး တို့တောင် တို့မကြည့်ဘဲ မစားဘူး၊ မကြိုက်ဘူးလို့ အော်တဲ့သူမျိုးလည်း ဖေဖေ တွေ့ဖူးတယ်။ သည်အထဲမှာ မိန်းမလျာတွေခမျာ ကံကဆိုးချင်တော့ အေအိုင်ဒီအက်စ်ဆိုတဲ့ ကုရာနတ္ထိရောဂါဆိုးကြီးနဲ့ သူတို့ဘ၀တွေနဲ့ကလည်း ဒွန်တွဲနေတော့ တချို့များဆို မိန်းမလျာတွေကို ‘အေအိုင်ဒီအက်စ်’ လို့တောင် ခေါ်ကြတာမျိုး ရှိလာတယ်။
ဒါလည်း ခေါ်တဲ့သူတွေ ဆင်ခြင်ဥာဏ်နည်းတာပဲ။ မိန်းမလျာမှ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တာလား။ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ။ မူးယစ်ဆေးကို သွေးကြောထဲသွင်းတဲ့ မူးယစ်ဆေးသမားလည်း ဆေးထိုးအပ်ကို သန့်ရှင်းအောင်မလုပ်ဘဲ သုံးရင် အေအိုင်ဒီအက်စ်ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ လိင်ကွဲချင်းဆက်ဆံပါတယ်ဆိုတဲ့၊ အများစုက မူမှန်သူလို့သတ်မှတ်ခံရသူမျိုးကလည်း အနေအထိုင်မဆင်ခြင်ဘဲ တွေ့ကရာမိန်းမပေါင်းစုံနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေမယ်ဆိုလည်း အေအိုင်ဒီအက်စ်ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
မစဉ်းစားတာက မိန်းမလျာပေမယ့် ရောဂါပိုးမရှိသူ အဖော်ယောက်ျားတစ်ယောက်တည်းနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပေါင်းသင်းနေထိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ် အေအိုင်ဒီအက်စ် ဖြစ်တော့မလဲ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း မိန်းမလျာက ကွန်ဒုံးကို စနစ်တကျသုံးတယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုလုပ်ရောဂါဖြစ်လာမလဲ။ အဲတော့ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး မိန်းမလျာကို မုန်းတီးရွံရှာ စက်ဆုပ်တာဟာ ဘယ်လိုမှကို ဘသာဝ မကျနိုင်တော့ဘူးပေါ့။
လူတစ်ယောက်ရဲ့လိင်စိတ်ဟာ သူဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကို ပြဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပါပဲ သား။ အဲဒီလိင်စိတ် အစစ်အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ မ၀ံ့မရဲဖြစ်နေ၊ ရှက်ကြောက်နေတာကြောင့် လူဟာ ဗျာပါဒများနေနိုင်တယ်၊ အထီးကျန် ဆန်နေနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းမလျာလို့ခေါ်ကြတဲ့ လိင်တူချင်း စုံမက်သူများမှာ ပိုဆိုးတယ်။ မိန်းမလျာဖြစ်နေကြောင်း လူသိခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲတွေ၊ ရှဲသွားမယ့်အပေါင်းအသင်းတွေ၊ လှောင်ပြောင်သရော်ကဲ့ရဲ့ခံရမယ့်အရေးတွေကြောင့် တချို့တွေဆို အတွင်းကြိတ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေရတတ်တယ်။ အလားတူပဲ၊ ယောက်ျားလျာ လို့ ခေါ်ကြတဲ့ မိန်းမချင်းမှ စုံမက်သူတချို့ဟာလည်း ငုံးဆူ လူမသိဘ၀မှာ မချိမဆန့်ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ် သားရဲ့။
အခုခေတ်မှာ မြို့ကြီးတွေပေါ်က ဆံပင်ညှပ်သူ၊ ဆံပင်အလှပြင်ပေးသူ၊ မိတ်ကပ်အလှပြင်ပေးသူ၊ ပန်းအလှပြင်ပေးသူများဟာလည်း လိင်တူချင်းစုံမက်သူများပင်ဖြစ်လင့်ကစား ဘ၀မှာ အောင်မြင် ကြွယ်ဝ ထယ်ဝါစွာရပ်တည်နိုင်လာပြီမို့ သူတို့ရဲ့ လိင်စိတ်ကို လက်မခံချင်သည့်တိုင် သူတို့ရဲ့ ကြွယ်ဝမှု(ငွေမျက်နှာ)ကြောင့် လူတောထဲကို တော်တော်ကြီး တိုးဝင်လာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘ၀အခြေအနေ၊ အကြောင်းတရားနဲ့ ကံကုသိုလ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မတူနိုင်ပါဘူး။ သည်အတွက် မိန်းမလျာအဖြစ်မိမိကိုယ်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဂုဏ်တယူယူနဲ့ နေနိုင်သူတွေရှိသလို မိန်းမလျာဖြစ်ရတာကိုပဲ သိမ်ငယ်သူလို့ ခံစားနေရတာများလည်း ရှိနိုင်တာပဲ။
တကယ်လို့များ သားကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်၊ သားရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်ဖြစ် လိင်တူချင်းမှ အကြိုက်ကျတဲ့ လိင်စိတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ ဖေဖေအကြံပေးလိုက်ပါရစေ။ ကိုယ့်လိုပဲဖြစ်နေသူများနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် သူတို့ကလည်း သူတို့အတွေ့အကြုံများနဲ့စာနာနားလည်ပြီး ကိုယ့်ကို ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်း၊ သင့်တဲ့ အကြံဥာဏ်တွေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဖေဖေနဲ့ပဲ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုဆွေးနွေးပေါ့ကွာ။ ဖေဖေကိုယ်တိုင်က လိင်တူချင်း စုံမက်တဲ့ ဘက်ကို သိပ်မယိမ်းဘဲ လိင်ကွဲကိုမှ အလွှတ်မဲ့စိတ်သန်သူဖြစ်နေလို့ ကိုယ့်ရင့်တတူ စာနာပေးနိုင်မှာ မဟုတ်သော်လည်း လေးလေးနက်နက်နဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်တော့ နားထောင်ပေးနိုင်မှာတော့ အသေအချာပဲလေ။ နားလည်း လည်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဖေဖေ့မှာ မိန်းမလျာမုန်းတဲ့ ရောဂါမရှိပါဘူး။ လောကမှာ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်တူချင်းစုံမက်သူဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်ကွဲမှစွဲလန်းသူ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးဟာ လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် လူလို့ပဲ ဖေဖေမြင်တယ်။ လူကို လူလိုပဲနားလည်ထောက်ထားပေးနိုင်တယ်။
မိန်းမလျာမို့လို့ နားရွက်နဲ့ အသက်ရှူပြီး မျက်စိနဲ့ ထမင်းစားနေတာမှ မဟုတ်ဘဲလေ။ မိန်းမလျာမို့လို့ စိတ်ဓာတ်သိမ်ဖျင်းနုံနဲ့တယ်လို့ ပြောလို့လည်းမရဘူး။ ကျားကျားလျားလျား ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့နဲ့ အင်မတန် စုတ်ပဲ့တဲ့ အမူအကျင့်တွေနဲ့လည်း တွေ့ရနိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။ အမှန်က လူဟာ လူဖြစ်နေတဲ့အတွက် ချစ်ခြင်း၊ မုန်းခြင်း၊ ကောက်ကျစ်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ခြင်း၊ စိတ်စေတနာကောင်းရှိခြင်း၊ ယုတ်မာခြင်းတွေလည်း ရှိနေမယ့်သူချည်းပဲ။ အဲဒါတွေက အဲဒီ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်နဲ့ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်ပက်သက်ခြင်းမရှိဘူး။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ မိန်းမပေမယ့် သာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက် မထားနိုင်တဲ့ စိတ်မျိုးထားပြီး သောတာပန်ဖြစ်သွားသူတွေ၊ ရဟန္တာမတွေတောင် အထင်အရှား ရှိလေတာပဲ။
ပြောချင်တာက ယောက်ျားစိတ်၊ မိန်းမစိတ်ဆိုတာ အရေးမကြီးဘူး၊ သဘောထားမှန်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးဆိုတာပဲ သားရေ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူသားတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်နဲ့ အဆင်မပြေဆုံး၊ ကိုယ့်အတွက် သက်သောင့်သက်သာ အရှိဆုံး နေထိုင်မှုပုံစံ ဘ၀ဟန်ကို ရယူနိုင်ဖို့က အင်မတန် အရေးကြီးတယ်။ ဘ၀မှာ နေရထိုင်ရအခက်ဆုံးကိစ္စကတော့ လိမ်လည်နေထိုင်ရတာ၊ ဟန်ဆောင်ရတာပါပဲ။
မရှိတာကို အရှိလုပ်၊ မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ်၊ ဟတ်ထုတ် ဟန်လုပ်နေရတာလောက် အဖြစ်ဆိုးတာ မရှိဘူး။ စိတ်တိုနေပါလျက်နဲ့ ယဉ်ကျေးဖော်ရွေပြနေရတာ၊ ငိုချင်နေပါလျက်နဲ့ အတင်းရယ်နေရတာမျိုးဟာ ကြာလေ စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းလေဖြစ်နေသလိုပဲ ကိုယ့်မှာ ဖြစ်နေတာရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် အသွင်အပြင်ကို အယောင်ဆောင်ရတာဟာ တော်တော့်ကို စိတ်ကျဉ်းကြပ်ရစမြဲပဲကွ။
ကြာလာရင် အဲဒါကြောင့်ပဲ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေ ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်။ မိသားစုဝင်ထဲကဖြစ်စေ၊ ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေထဲကဖြစ်စေ၊ အသိအကျွမ်းထဲကဖြစ်စေ ကိုယ်ယုံကြည်နိုင်တဲ့သူ ဘယ်သူ့ကိုဖြစ်ဖြစ် ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟပြောဆိုလိုက်ခြင်းဟာ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ လုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲ။
အဲသလို ဖွင့်ဟလိုက်ခြင်းဟာဖြင့် တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ခံစားနေခဲ့ရသမျှ ပွင့်ထွက်သွားတဲ့အတွက် ရင်ပေါ့သွားနိုင်တာမျိုးကလား။ ဖေဖေ့ဆီ ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာကြသူတွေဆိုရင် ဖေဖေက ဘာမှတောင် လုပ်မပေးရသေးဘူး၊ ရင်ဖွင့်လိုက်ရတာနဲ့ကို သူတို့မှာ ခံစားနေရသမျှ တစ်ဝက်မက သက်သာသွားတဲ့အကြောင်း ပြောကြတယ်။ သားဟာ မိန်းမလျာမုန်းတဲ့သူတစ်ယောက် မဖြစ်အောင် သည်နေရာမှာ ဖေဖေ တစ်ခုတော့ မှာချင်ပါတယ်။ လိင်တူချင်းမှ စုံမက်သူဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်ကွဲကိုမှ စွဲလန်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တူတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ၊ ဘာတူတာလဲဆိုတော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုထုဇဉ်လူသားမှန်သမျှဟာ ကိုယ့်အတွက် ပျော်ရွှင်သာယာမှုအပေါင်းကို ဆောင်ကြဉ်းလာနိုင်မယ့် ‘ဘ၀အဖော်’ (၀ါ) ‘ကြင်ဖက်သက်နှံ’ ကို လိုချင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဟေ့။ မိန်းမလျာဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူလိုချင်တဲ့ကြင်ဖက်၊ ဘ၀ဖော်ပုံစံက ခြားနားနေတာတစ်ခုပါပဲ။ ခမျာများမှာလည်း လိင်ကွဲချင်းမှ စွဲလန်းသူလို ကိုယ်ကချစ်လိုက်ချင်တာ၊ ကိုယ့်ကိုလည်း အချစ်ခံချင်နေတာပါပဲ။ မိန်းမလျာက ကိုယ်ချစ်ရမယ့်သူ၊ ကိုယ့်ကိုချစ်မယ့်သူကို လိင်တူယောက်ျားချင်းထဲက လိုက်ရှာတယ်၊ လိင်ကွဲကိုစုံမက်သူ သာမန်ယောက်ျားသားများကတော့ ကိုယ်ချစ်ရမယ့်သူ၊ ကိုယ့်ကိုချစ်မယ့်သူကို လိင်ကွဲမိန်းမသားများထဲက လိုက်ရှာပါတယ်။ ဒါပဲ ကွဲတာပါ။
လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ ဘ၀မှာ သာယာမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ နွေးထွေးလှိုက်လှဲမှုကို ဖွေရှာနေသူချည်းပဲဆိုတာ သားမှတ်ထားပါ။
လိင်နှစ်မျိုးစလုံးကိုစုံမက်သူကတော့ လိင်တူချင်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေ၊ လိင်ကွဲတွေနဲ့လည်း ပျော်တတ်သူမျိုးကို ခေါ်တာပါ သား။ လိင်တူချင်းကို ပိုစုံမက်သော်လည်း လိင်ကွဲနဲ့ တွေ့တဲ့အခါလည်း အဆင်ပြေနိုင်သူဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မယ်၊ လိင်ကွဲချင်းကို ပိုစုံမက်ပေမယ့်လည်း လိင်တူချင်းနဲ့ တစ်ခါတလေဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေနိုင်သူဖြစ်ချင်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း ယောက်ျား၊ မိန်းမခွဲခြားမှုမရှိဘဲ လိင်ကိစ္စမှာ ဘယ်လိင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်သာယာတတ်တဲ့သူမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပြန်တယ် သားရဲ့။
ဒါကလည်း လိင်တူချင်းစုံမက်စိတ်၊ လိင်ကွဲမှ မက်မောစိတ်များလိုပဲ ပုံမှန်စိတ်ပါပဲ၊ သဘာဝပါပဲ။ တချို့ပညာရှင်တွေကတော့ သည်စိတ်ကမှ တကယ့်မူမှန်စိတ်လို့တောင် တုတ်ထမ်းပြီး ငြင်းခုန်ပြောဆိုတတ်ကြတယ်ကွ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အထက်မှာ ရေးပြခဲ့တဲ့အတိုင်း လူမှန်ရင် မိန်းမစိတ်နဲ့ ယောက်ျားစိတ် ဒွန်တွဲနေတတ်မြဲမို့ပေါ့။
တချို့လူတွေကတော့ အဲလိုစိတ်မျိုးရှိသူကို စိတ်နှခွရှိသူ၊ တွေဝေသူ၊ မပြတ်သားသူလို့ သတ်မှတ်ကြပေမယ့် အဲလိုစိတ်မျိုးနဲ့လူတွေကကျတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မူမှန်သူများအဖြစ် ရှုမြင်ကြပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ လိင်တူတွေရဲ့လောကမှာရော၊ လိင်ကွဲတွေရဲ့လောကမှာပါ နှစ်မျိုးနှစ်စားကျင်လည်ကျက်စား မွေ့လျော်နိုင်သူများအဖြစ် မြင်နေလို့ပါပဲ။
ဖေဖေ့တစ်ဦးတည်း သဘောကိုပြောရင်တော့ ဘာမှ သိပ် အရေးမကြီးလှပါဘူး သားရယ်။ မင့်ဖေဖေက သိပ်ကို ပွေလီတော့ လိင်တူချင်းစုံမက်သူ ယောက်ျားတွေနဲ့သာမက၊ လိင်တူချင်းစုံမက်သူ မိန်းမတွေနဲ့ပါ အတွင်းကျကျ ပတ်သက်ဖူးတယ်။ သည်အခါမှာ လူ့စိတ်၊ လူ့အပြုအမူတို့ရဲ့ ဆန်းကျယ်နက်နဲပုံကိုသာ သြချမိရသလို အရာရာဟာ သဘာဝပါပဲလို့ ယောနိေဿာမနဿီကာယနိုင်သွားခဲ့တော့တာပဲ ငါ့သား။
လိင်တူချင်းစုံမက်သူများ ချစ်တင်းနှောတာလိင်တူချင်းစုံမက်သူများ ချစ်တင်းနှောကြတဲ့အခါမှာလည်း လိင်ကွဲချင်းချစ်တင်းနှောကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ မူကွဲ သိပ်မရှိဘူးကွ။ အသေးစိတ်တော့ ဖေဖေ ရေးမပြတော့ဘူးဟေ့။ ပါးစပ်တို့၊ ချက်တို့၊ နားရွက်တို့၊ ဒူးတို့ကို လူသိရှင်ကြားရေးလို့ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် တချို့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ မွေးကတည်းက ပါမလာသယောင် ညာဝါးဖုံးကွယ်လိုသူတွေက ဖေဖေသည်လောက်ရေးပြတာတောင် လွန်လှပါပြီ၊ ကျွံလှပါပြီလို့ နတ်သံနှောနှော ပြကြလေတော့ သည်ကိစ္စမှာလည်း အသေးစိတ်ရေးပြနေရင် ခမျာများမှာ အခြောက်တိုက် အကုသိုလ်ဖြစ်နေရှာကြမှာစိုးလို့ပဲကွ။ သိချင်တဲ့သူက ဖေဖေ့ဆီ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး မေးကြ မြန်းကြ၊ ပြောကြဆိုကြလိမ့်မပေါ့လို့ အောက်မေ့လိုက်ရုံရှိတာပဲ။ မဟုတ်ဘူးလား။
ကိုးကားချက်။ ။ အတ္တကျော်
လက်တွဲဖော်စာအုပ်(၉) “သားငယ်တို့ နားလည်ဖို့” စာအုပ်မှ ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘာအားလုံးကောင်းတာလဲ။မဟုတ်တာတွေဖြစ်ဖို့အစပျိုးနေတာကိုများ ….။ဒိုးကလေးကနေ ဒိုးပြားဖြစ်သွားအုံးမယ်။သတိထားနေ … ။
မင်းက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကို ကာဘာယူပြီး ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ကာ
ငါလဲဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကို မှီပြီး ပြောပြပါမယ် တတ်တယ်မတတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ မဆုံးဖြတ်လေနဲ့ 
လုပ်ထိုက်၏ မလုပ်တန် ထိုအခြင်းရာကိုသာ ဆုံးဖြတ်ပေတော့
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်အရ သဘာဝကို မလွန်ဆန်ကောင်းဘူးဆိုတာကို အလျှင်ဆင်ခြင်လေ
ယောက်ျားမိန်းမဟူသည် မြင့်မြတ်ခြင်း နိမ့်ကျခြင်း(ရုပ်နာမ်နယ်မှ) အထူးမရှိလှပေဘူး
ယောက်ျားတို့ သည် နပုံးပ ဖြစ်ကြမူ အတိတ်၏သောကာလမှ ကာမေသုကံကို ပြုပါဘူးခဲ့၍ သာဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်ကို သတိဆင်ခြင်လေ
မင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကို နားလည်နိုင်စွမ်းရှိပါမူ ကောင်းလေစွဟူ၍သာဆိုခြင်ပါသည်
မူမမှန်သောအကျင့်သည် မိမိ၌ ရှိခြင်းကို သိသောအခါ ဆင်ခြင်ရာ၏
အရှင်သူမြတ်အားပြစ်မှားမူ၍ ယောက်ျားစင်စစ်မှသည် မိန်းမဖြစ်၏မူလည်း ထိုအမှားကို နာလည်သိပွား ဆင်ခြင် တရားဖြင့် ပြုပြင်(မိမိကိုယ်မိမိ) လေသောအခါ
သံသရာ မှပင်ကင်းလွတ်ခဲ့ရပြီး သည် အထင်အအရှားရှိလေရဲ့ သား။
မင်းတကယ်လုပ်သင့်တာက ကိုယ့်ဒုက္ခ(ယောက်ျားဖြစ်ပါလျှက် ယောက်ျားနှင့် ကာမအမှု့ ပြုလိုခြင်း) ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိမ်းသတ်နိုင်ခြင်း ရန်အကြောင်းကို ရှာဖွေသင့်တယ်
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ထည်းကနေနော်
ယနေ့ လူ့ အခွင့်ရေးတွေဆိုတာတော့ ငါမဆွေးနွေးလိုဘူး
မတတ်သာလို့ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ခံရလို့ကြိတ်မှိတ်ပြီး ခံလိုက်တာကောင်းတယ်
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကို နားလည်ပါလျှက်နဲ့ 
လက်ချာတွေပေးပြီး သူတပါးကို စီးရုံးခဲ့လို့သူတစ်ပါးတို့မိမိမူအတိုင်း ဖောက်ပြားကြပါမူ
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကို ယုံကြည်သူမင်းအတွက်
နှစ်ပိုင်းပြတ်သွားသော ထန်းပင်ကို ပြန်ဆက်၍ ရှင်သန်ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်သလို ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်
အထူးပြောခြင်တာက ကိုယ့်ဒုက္ခကိုကိုယ် ကြိတ်မှိတ်ပြီးခံလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ
သူများကို လုံးဝ မစည်းရုံးလေနဲ့ 
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကို မင်းလက္ခံနိုင်မှ ပြောတာပါ
မိမိ၏ စိတ်ကို မိမိ ကောင်းစွာ ဆောက်တည်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမြတ်သော အကျင့်သီလကို စောင့်ထိမ်းနိုင်စေသတည်း။
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းသည် မင်းအလုပ် ငါ့အလုပ်မဟုတ်။
မိုက်-ဂျွန်-ပု ကိုလုံးဝ ထောက်ခံပါတယ် ..
အခုတော့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို ရှေ့တန်းတင်လိုက်လို့ .. ဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်ရတာ ..
တကယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဆိုထားပြီးသား ..
အတိတ်ဘ၀က မှားမိခဲ့လို့ ဒီဘ၀မှာ ဒီလို ဖြစ်ရတာ ..
ဒါကြောင့် ဒီဘ၀မှာ ယောက်ျား ရင့်မကြီးတွေလဲ .. သူများအိမ်ရာကို ကျူးကျော်တယ် (ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သုံးလိုက်တာနော် .. အိမ်ပေါ် ကျူးကျော်မှ မဟုတ်ဘူး) ဆိုရင်
ယခုဘ၀မှ အကျိုးပေးက အဆင်မပြေရင် ထောင်ကျတာပေါ့ ..
ဒီဘ၀မှာ ပြစ်ဒဏ် မကျတာတောင်မှ နောက် ဘ၀ဘ၀များမှာ အခုလို ဟိုမရောက် ဒီမရောက် စိတ်တွေ လယ်နေမှာ မြင်ယောင်သေး ..
ဒါကြောင့် ဖြိုးရယ် .. စာအုပ်ထုတ်ရောင်းပါလား .. ၀ါသနာ ပါတဲ့လူတွေ ဖတ်ချင်တဲ့လူ ဖတ်ကြလိမ့်မယ် ..
မာမီဖြိုး အစပိုင်းဖတ်ရတာစိတ်ဝင်စားဘို့အင်မတန်ကောင်းပါတယ် နောက်ပိုင်းကျတော့လဲဖြိုးရဲ့မူအတိုင်း(လိင်တူချင်းစုံမက်သူများ ချစ်တင်းနှောတာလိင်တူချင်းစုံမက်သူများ ချစ်တင်းနှောကြတဲ့အခါမှာလည်း လိင်ကွဲချင်းချစ်တင်းနှောကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ မူကွဲ သိပ်မရှိဘူးကွ။)တဲ့ ကြားကြားသမျှအရတ်ကတို့ မာမီဖြိုး ဒီဆိုက်မှာမတင်ယင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် ဒီကမ္ဘာလောကမှာသဘာဝကဖန်တီပေးထားတဲ့ဖိုနဲ့မ ရှိနေတယ်လေ ဒီကမ္ဘာကြီးတိုးတက်စည်ပင်လါတာကလဲ ဖိုနဲ့မ ကြောင့် တနည်းပြောရယင် ယောက်ကျားနဲ့မိန်မ အဖိုဓါတ်နဲ့အမဓါတ် ဆန်ကျင်ဘက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတိုးတက်လါကြရတာပါ တို့ငယ်ငယ်ကစကားတခုကြားခဲ့ဘူးတယ်(AIDS)တို့(HIV)တို့မပေါ်သေးဘူး (ရိုင်းသွားယင်ခွင့်လွတ်ပါ) ဖါသွားချလို့ဖါကျိုးယင်ကုလို့ရတယ် အချောက်ကိုသွားချလို့အချောက်ကျိုးကျိုးယင်ကုလို့မရဘူးတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်လေးဆယ်လေါက်ကကြားဘူးတဲ့စကားပါ သဘာဝကိုဆန့်ကျင်လါတဲ့အရာမှန်သမျှဖေါက်ပြန်ချင်းတမျိုးပါဘဲ …..
သဘာဝကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဖင်ချရင် ပုဒ်မ ( ) ပန်းစုပ်ရင် ပုဒ်မ ( ) .. မနက်ဖန် ရှာပေးမယ် ..
ဒီတခါတော့ အဘပု ရေးတာကို တကယ် ချီးကျူးပါတယ်။
ဖြိုးဆိုတဲ့ မန်ဘာ သူရေးသမျှ လိုက်ပြီး တုန့်ပြန်လျှင်လည်း မကောင်း မတုန့်ပြန် နေသော်လည်း တနေ့တနေ့ ပိုဆိုးလာသည်.. ကိုယ့်ဘ၀ ကို နားမလည် သူများ ကို အတင်းဇွတ်သွင်း.. ဖြိုး ဘယ်သူကိုမှ မမြူဆွယ်ပါဘူးလို့ ပြောအုန်းမယ်.. မမြူဆွယ်ဘူး ဆိုရင် ဒီမှာ တင်နေတဲ့ စာတွေကို အသက်ကြီးသူ ငယ်သူပါ အကုန် ဖတ်နေကြတာပါ.. ငယ်သူတွေလည်း ငါတို့ကော ဒီလိုမျိုးလား ဆိုပြီး နဝေ တိန်းတောင် ဖြစ်စေတာမျိုး.. ပုံတွေတင်လိုက်ရင်လည်း ယောကျား အချင်းချင်း ပွတ်သီး ပွတ်သပ် လုပ်ပြီး ဈန်ဝင်နေတဲ့ ပုံတွေကြီးဘဲ.. ဒီပိုစ်ကို ဖတ်ရင် ပုံဘေးနားက စာကို ဖတ်ရင်တောင် ဘေးက လူရှိရင် ဒီပုံကြီးနဲ့ ဖတ်ရတာ.. ဘေးကလူတွေ တမျိုးတမည် ထင်စရာ ဖြစ်လောက်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ ပုံတွေ ဖြစ်နေသည်။ ဖြိုးလည်း သိမှာပါ.. မြွေမြွေချင်း ခြေမြင်တယ်တဲ့.. အခြောက်ချင်း ကတော့ သူတို့ ဆန္ဒရှိတာ သူတို့ လုပ်ကြမှာဘဲ.. တနည်းပြောရလျှင်.. သချာင်္ဘာသာ စိတ်ဝင်စား သူသည် သချာင်္နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အတွက် အချက် ကို သူ နည်း သူ့ဟန်နဲ့ ရှာဖွေပြီး လေ့လာမှာပါ.. အများမြင်အောင်.. လိုက်ပြထားတာ မရှိလည်း သူတို့ ဘယ်မှာ ရှာရမလဲ သိပါသည်။ ဒီဆိုက်သည် အခြောက်ဆိုက်မဟုတ်ပါ.. အခု တင်ပြီးတဲ့ ပိုစ်တွေက လည်း များနေပြီ.. အားလုံးကလည်း အခြောက်ပိုစ်တွေကြီးဘဲ.. ဒီလောက် တင်ပြီးရင် အားလုံး အခြောက်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ သိနေပါပြီ.. အခြောက်အကြောင်း သိချင်တဲ့ သူ အခြောက် အကြောင်း ရှာဖတ်ပါလိမ့်မယ်.. တော်ပါတော့.. အရင်တုန်းကလည်း အခြောက်ဆိုတာ မြင်နေပါသည်.. သို့သော် သိပ်ပြီး ဖျပ်ဖျပ်လူး လူကြားထဲ အတင်း ငါတို့ အခြောက်.. ဆိုပြီး ကြေညာမနေပါဘူး.. အခုကတော့ အခြောက်တွေ အတင်း တိုးပြီး နေရာယူနေတယ်။ နေရာယူချင်တယ်ဆိုရင် တခုခု ထူးချွန်အောင် လုပ်သင့်သည်.. အခြောက် တယောက် အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်သွားသည် ဟု ဆိုလျှင်.. အများကတော့ ဒီလို အခြောက်ကို ဘယ်သူမှ ပြစ်ပါယ်မှာ မဟုတ်ဘူး.. နေရာလိုချင်ရင် နေရာ ရနိုင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်.. ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘဲ.. နေရာ အတင်း လာမယူနဲ့.. မိတ်ကပ်ပြင်တဲ့ ခင်စန်းဝင်းတို့ ဆိုလျှင် အခြောက်ဖြစ်သည်.. သို့သော်.. သူလုပ်တဲ့ အစွမ်းအစကို လူတွေ အသိအမှတ် မပြုဘဲပို မနေနိုင်ဘူး.. သူလို လူမျိုး ဘယ်သူမှ မစွန့်ပစ်ကြပါ.. ပိုစ်တွေ တင်လို့ရတိုင်း တင်ပြီး.. အခြောက်တွေ ကာမ ကိစ္စ လူတွေ သိအောင် ဖောက်သည်ချ နေတာတော့ မကောင်းဘူး.. ဖြိုးကိုယ်တိုင် ကျားကျားချင်း စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရင်တောင်မှ.. ဖြိုး ဘာတွေ ထူးချွှန်အောင် လုပ်ပြီးပြီလဲ.. အများဝိုင်းကျဉ်တဲ့ ပိုစ်တွေ တင်နေတာတော့ မကောင်းဘူး.. ဒီမိုကရေစီ မဆန်ဘူးဘဲပြောပြော.. လူမျိုး ဘာသာနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို တော့ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ နောက်တခါ ထပ်တင်မယ်ဆိုရင်.. ဖြိုး အခြောက်တွေ ကိစ္စ တင်တာထက်.. ဖြိုး လူတွေနေတဲ့ လူပတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတွေကို ဘယ်လို အကျိုးပြုပြီးလို့.. ဘယ်လို နေရာ ရနေသလဲ ဆိုတာ တင်ပါ.. အခုအချိန်မှာတော့ ဖြိုးတင်တဲ့ ပိုစ်တွေ အတွက် အားလုံး စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရတယ်။ နားလည်မှာပါ.. မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာတွေ တင်တာကို မြန်မာလို ပြန်ရေးပြီး ကွန်မန်းပေးတယ်ဆိုတော့ နားလည်မှာပါ.. ဘာကို ဆိုလိုသလဲ ဆိုတာ.. ဖြိုးဆိုတဲ့ အခြောက် ဘာတွေ လုပ်နိင်ပါတယ် ဆိုတာ တင်ပေးပေါ့.. အရည်အချင်းရှိတဲ့ အခြောက်မတွေကို အားလုံးက ၀ိုင်းမပါယ်ပါဘူး.. အခြောက်ကာမ ကိစ္စ ခရေစိတွင်းကျ ရေးနေတာ မကောင်းဘူး.. ဒီမှာ အသက် မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြိုး ကိုယ်ပိုင် အသိနဲ့ ကိုယ့်ဟာကို စဉ်းစား ဆင်ခြင်ပါ။
ဆူး တိုက်ခိုက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်.. သေချာ စဉ်းစားပါ.. အများကို ဆန့်ကျင်ပြီး တယောက်ထဲ ချွှန်ထွက်နေတာ မကောင်းဘူး။ ယောကျားမှာလည်း ယောကျား သတ္တိရှိတယ်.. မိန်းမမှာလည်း မိန်းမ သတ္တိရှိတယ်.. ကျားမဟုတ် မမဟုတ်မှာကော ဘယ်လို သတ္တိတွေ ရှိလဲ.. ကာမ အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ အတွက် သတ္တိ သတ်သတ်ဘဲ ရှိတယ်ဆို.. ဒီမှာ လာမရေးနဲ့တော့.. ဒီက လူတွေ အခြောက် ကာမ ဆက်ဆံတာကို လေ့လာဖို့ အတွက် မျက်စိအညောင်းခံ ဖတ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ထွေရာလေးပါး ဆွေးနွေးပြီး.. စိတ်အပန်းဖြေ ဗဟုသုတ ရစေဖို့အတွက် ၀င်ဖတ်နေကြတာ.. ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတကြောင်း သူများ စိတ်မနှစ်သက်တာ မဖြစ်စေဖို့ အရေးကြီးတယ်.. ကိုယ်ရေးတဲ့ စာကြောင်း သူများအတွက်လည်း အကျိုး မရှိ ကိုယ်အတွက်လည်း အကျိုးမရှိ.. သို့သော် သူတပါး ပြုံးရယ်စေတယ် ဆိုရင်လည်း သူတပါး အတွက် စိတ်ပေါ့ပါးစေဖို့အတွက် အကျိုးတခု ဖြစ်စေပါတယ်။ ဟာသ လူရွင်တော် လုပ်ခိုင်းတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်.. အများ လိုလားတဲ့ အသိပညာလေးတွေ ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သို့သော်.. အခြောက် ကာမ ကိစ္စမှ လွဲလို့ တခြား မသိဘူး ဆိုရင်တော့.. မဖိတ်ခေါ်ပါဘူး.. ဒီမှာ ရှိတဲ့ မန်ဘာတွေ အားလုံး စုပေါင်းပြီး တင်ပြီးသား ပိုစ်တွေ ဖျက်ပေးရတဲ့ အထိ မျက်ချက်ရေးပြီး သတင်းပို့မှာပါ.. တခု တင်လိုက်.. အများ ၀ိုင်းပါယ်လိုက်ဆိုရင်တော့.. မကောင်းဘူးနော်.. ဒီမှာ ဖတ်တဲ့ မန်ဘာ အားလုံးလည်း လုပ်နိုင်မယ် ထင်တယ်.. ဖြိုး နောက်ထပ် အခြောက် ကာမ ကိစ္စ လာရေးရင်.. မှတ်ချက်ရေးပြီး အားလုံး ၀ိုင်းဖျက်ခိုင်းပေးပါ.. ဖြိုးဆိုတာ.. ပိုစ်တင်တဲ့ လူ တယောက်ထဲ.. ဒီမှာ မန်ဘာတွေ အများကြီး ရှိတယ်.. အများနဲ့ တယောက် အားချင်းယှဉ် ကြတာပေါ့.. ထပ်တင်ရင်တော့.. အဲဒီလိုဘဲ စိန်ခေါ်လိုက်တော့မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဆူးပြောတာ လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ ထပ်ရေးရင် ဒီတစ်ခါ ဆဲပြီ။
အခြောက်ဖြစ်တာ မဖြစ်တာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရွေးချယ်ကြပါ။
ကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့ ကိုယ်အထဲ့ခံတာ ခံကြပါ၊
မဟုတ်တဲ့ အပေါက်ထဲကို ထဲ့တာကောင်းကြောင်းတော့ မကြေငြာသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ကောင်းရင် ကိုယ် ဘာသာဘဲကောင်းပါ လူပုံအလည်မကြေငြာပါနဲ့ဗျို့။
ဖြိုး ရေဆိုက်ပြောင်းဘို့ ရှာထားတယ် http://www.myanmargay.socialgo.com မင်းဘော်ဒါတွေအများကြီးဘဲ မင်းပိုပျော်မှာပါ……
ဘယ်လိုဖြစ်လို့…mandalaygazette… မှာ အခြောက်တွေရောက်နေတာတုန်း….
ဒီစာက ဆယ်ကျော်သက် ငယ်ရွယ်သူတွေ မဖတ်သင့်တဲ့ စာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတွေးအခေါ် မရင့် ကျပ်သေးတဲ့ ကလေးတွေ လုံးဝမဖတ်သင့်တဲ့ စာပါ။
မန္တလေး ဂေဇက်မှာ ဒီလိုစာပေးတင်တာတော့ ကြာလာရင် မကောင်းဘူးဗျ။
မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီ ဆိုဒ်မှာ ဒီလိုစာ ရှိနေရင် ကိုယ့်သားသမီးကို ပေးဖတ်စေချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဟုတ်ကဲ့… ကျနော့်ကိုချည်းပဲ ၀ိုင်းပြီးဆဲဆိုနေတာမျိုး မလုပ်ပဲနဲ့ လူမှုသိုင်းဝိုင်းထဲမှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတွေကို နည်းနည်းလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ စာထဲက အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တွေးတော်ကြည့်စေချင်ပါတယ်… ပြီးတော့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးထားတာက ဖြိုး ရေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး… စာရေးသူနဲ့ နာမည်ကို အောက်မှာ ဖတ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား… ဒီဆောင်းပါးကို ရေးထားတဲ့သူက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ထိပ်တန်းစာရေးဆရာအဆင့်ဝင် (မိန်းမတိုင်း ယောက်ျားတိုင်း… အဲလို မသုံးချင်ပါဘူး) လူသားတိုင်း အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စဖြစ်ဖြစ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေရတဲ့ စာရေးဆရာ အတ္တကျော်ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ… လိင်ကိစ္စကို ရေးသားထားတဲ့သတင်းစကားလည်း တစ်ခုမှ ပါဝင်နေတာ မရှိပါဘူး… ပြီးတော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတတွေကို အများကြီးရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်… လူတိုင်းမှာ လိင်စိတ်ခံယူမှုဆိုတာ အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်… လိင်စိတ်ခံယူမှုလို့ ပြောတာနဲ့ လိင်ကိစ္စနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျား… Sexual Orientation ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သေချာနားလည်အောင် လေ့လာစေချင်ပါတယ်… အားလုံး ရမ်းသန်းပြီး ပြောချင်တာတွေပဲ ပြောနေတာမဟုတ်ပဲ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီး ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတာ သူတို့တွေအတွက်လည်း သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀လေးတွေ ဒီထက် ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်လာအောင် ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ဆောင်ပေးသင့်လဲဆိုတာကို နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် တွေးပေးကြစေချင်ပါတယ်… လူအသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခု ပြောင်းလဲတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာ ဟိုလူကတော့ ပါသင့်တယ် ဒီလူတွေမျိုးကိုတော့ ချန်ထားသင့်တယ်ဆိုပြီး လုပ်ရင် အဲဒီလူအသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ ဘယ်တော့မှ ပြီးပြည့်စုံ့အောင် ပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ.
ကျုပ်က စာရေးဆရာ အတ္တကျော်ရဲ့ညီ ကြောင်အတ္တ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကိုရဲ့စာကို အခွင့်မရဘဲ မသုံးပါနဲ့၊ ကျုပ်မကြိုက်ဘူး။
ဟုတ်ကဲ့… ဒီဆောင်းပါးက ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ပါပစ်ကို ရထားတာ ကြာလှပါပြီခင်ဗျား
ကျနော်အနေနဲ့ ခွင့်ပြုချက် မရတဲ့စာတွေကို မသုံးစွဲပါဘူးခင်ဗျား
ဖြိုးပြောတာကိုလက်ခံပါတယ် … အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စက နေ့တိုင်းလိုလို အဲဒီလိုပို့စ်တွေကို မြင်နေရလို့ အဖွဲ့ဝင်တွေက မမြင်ချင်တော့တာပါ … နားလည်သွားပြီ လုံလောက်ပါပြီလို့ education အနေနဲ့ ပြည့်စုံသွားပါပြီ ထပ်ပြီး တင်ပြစရာမလိုတော့ပါဘူးဆိုပြီး တညီတညွတ်ထောက်ခံနေကြတာ … လူတိုင်းလူတိုင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရင်ဖွင့်နိုင်ပေမယ့် အများကဆန့်ကျင်လာရင် အများဆန္ဒကိုလေးစားသင့်ပါတယ်။
ဖြိုးကိုယ်တိုင်ရေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ပြောချင်တာအရိပ်အယောင်လောက်ရေးပြီး link ပေးလိုက်ရင် စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေက သွားဖတ်မှာပါ။
လုပ်မနေနဲဖြိုး။ ကိုအတ္တကျော် ဘိုင်ပြတ်လို့ ကျုပ်ကို မူပိုင်ခွင့် ရောင်းလိုက်ပြီးပြီ။ ရပ်တန်းကရပ်ပါ။ မယုံရင် သူ့ကိုသွားမေးကြည့်။
အတ္တကျော် ဘာပဲ သိပ်ပြီး နာမည် ကြီးကြီး သူရေးတဲ့ မဖဲဝါ စာအုပ်တအုပ် ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဲ ဘာမှ အစီ အငေါ် မရှိ စိတ်ထဲ ရှိတာ လျောက်ရေးထား အသိသာကြီး စာရေးတယ်ဆိုတာ မူကြို မှာ ကကြီး ခခွေး သင်ပြိးရင် ရေးလို့ရပြိ.. သူကို လူတွေ အားပေးနေပေမဲ့.. သူရဲ့ မဖဲဝါ ဆိုတဲ့ စာအုပ် တခု တည်း တင် တော်တော် လုံလောက်ပြီ သူ့ရဲ့ အရေး အသားကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ်.. စာရေးတယ် ဆိုတာ သေချာတဲ့ လုံလောက်တဲ့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်.. သေချာ မသိဘဲ လျောက်မရေးရဘူး.. သူရေးချင်တာ ရေးပြီး လူတွေ အာရုံမှာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဖြစ်အောင် ရေးတတ်တဲ့ စာရေး ဆရာဆိုတာ အသိသာကြီး.. ဖြိုးက ဒါနဲ့ ကျနော်ကိုဘဲ မပြောနဲ့ ကျနောရေးတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ အသုံး အနှုန်းများ မှားနေလားလို့.. မိန်းမစိတ်ပေါက်တာ မဟုတ်ဘဲ.. နှစ်ပင်လိမ် ဖြစ်နေတာလား. ကျားကျား ယားယား.. စိတ်ပါနေတာ နဲ့ တူပါရဲ့..ပညာပေး မဟုတ်တော့ဘူး အသိပညာ နုသေးတဲ့ ငယ်ရွယ်သူတွေကို စိတ်ဇဝေ ဇ၀ါ ဖြစ်အောင် လမ်းညွန်ပေးနေတာ.. ဒီစာအုပ်က လူကြီးတွေ သိချင်တဲ့ လူတွေ ပဲ ဖတ်သင့်တာ.. စာအုပ်ဆိုတာ.. ဖတ်ချင်တဲ့ သူက ၀ယ်မှ ဖတ်လို့ရတာ.. လူတကာ မြင်သာအောင် တင်ပြပြီး ဖတ်ဖြစ်အောင် တင်ပြပေးဖို့ မလိုဘူး.. အခြောက်ဆိုတာ လူဦးရေရဲ့ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ရှိမလဲ.. ပြန်စဉ်းစားကြည့်.. လောကမှာ အထူးပြုခံရတဲံ လူဆိုတာ ထူးချွှန်တဲ့ လူဘဲ ရှိတယ်.. မင်း က ဟိုဒင်းဘဲ ချွှန်နေတာ ဖြစ်နေတော့ ခက်တယ်.. အခွင့် အရေးလိုချင်ရင် အခွင့် အရေး ရနိုင်အောင် လုပ်.. မင်း သိပ်တော်လွန်းရင် မင်းကို ဘယ်သူမှ မပစ်ပါယ်ဘူး.. ဒါနဲ့ ကြုံလို့ ဆက်ပြောအုန်းမယ်.. မင်ကြိုက်သလောက် ကျိမ်ဆဲပြီး အောက်လမ်းနည်းနဲ့ လုပ်နိင်တယ်နော်.. မင်းတို့ အခြောက်တွေက ဒါမျိုးတွေ ဘက်မှာ ၀ါသနာပါတယ်.. မင်း အဲဒီ ဘက်မှာ တော်တယ်ဆိုရင်လည်း မင်း ကို ဆူး အသိ အမှတ် ပြုနိုင်တဲ့ အထိ အောက်လမ်း အထက်လမ်း ကြိုက်တဲ့ နည်းနဲ့ တိုက်နိုင်တယ်..
Mandalay ရတနာပုံမှာ လာရောက် ဖတ်ကြသူတွေထဲမှာ ရဟန်း၊ရှင်နဲ့ အမျိုးသမီး တွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အတုယူနှားတတ်ကြမဲ့ လူတွေလဲပါမယ် ဆက်ဆံတဲ့နည်း မျိုး စုံထပ်နေတယ် ပြီးတော့လဲကာမဆက်ယှက် မှူ့ စာကြောင်းတွေ ထပ်နေ တဲ့ သဘာဝမဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ပုံဖေါ်ရေးသားထားတွေဟာ ရေးတဲ့သူနဲ့ ဒီကအယ်ဒီတာတွေမှာပါ တာဝန်ရှိနေတာ အဘယ်ကြောင့် မသိချင်ယောယင်ဆောင်နေကြသနည်း..။စာပေ သည် အတုယူ ဗဟုသုတရစေရန် မိမိ လူမျိုးအားတိုးးတက်စေချင်းအလိုငှာေ၇းသားကြပါသည်..အခုတော……ဗျာ……………။
့ နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ သည် မိန်းမလျှာတို့၏ဘဝကို ဒီ လိုပိုစ့်များအား စေစပ့်စွာ စစ်ဆေးပြီးမှ သာ ခွင့်ပြုသင့်ပါသည်..။၎င်း အကြောင်း နှင့်ပတ် သက်လျှင် မိန်းမလျာ တို့၏ ဖျက်ဆီးချင်း ခံရသော ဆယ်ကျော် သက် လူငယ် များ ကို တွေ့ခဲ့ ရြ ပီး လိင်နဲ့ပတ် သက်သော ပညာပေးခြင်း၊ဆေးကုသခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ရပါသည်..။ဆိုလိုသည်မှာ ဆယ်ကျော် သက်များအား ကာ မဖြင့်ဆက်ဆံပြုကျင့်မှူ့ သည် မုဒိန်း မှူ့ လိင် ပိုင်း ဆိုင်ရာ နှောက်ယှက် မှူ့ ပြစ်မှူ့အမျိုးအစားထဲတွင် ပါဝင်သည်..။မြန်မာပြည် တွင် မိန်းမလျာများ ကို အသိမှတ်ပြုပါ က ၎င်းအတွက် ဥပဒေ တရပ် အားပြထမ်းသင့်သည်။သို့သော်လည်း ဘာ သာယဉ်ကျေးမှူ့အရ ဆန့်ကျင်နေသောကြော့င် မည်မျှပင် လူ့ အခွင်ရေးရှိနေပါစေ ခွင်ပြုရန် အတော် ပင်စဉ်းစားကြရမည်….သို့သော် မဲရေ အတွက် လိုလားသော ပါတီများ စည်းရုံး နှိုင် သည်မှာ မိန်းမလျာများ အခွင်ရေး ငါပါတီ အနှိုင် ရအောင် မဲဆွယ်ခြင်ဆွယ် နှိုင် သည် ကိုသော စစ် မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ရရှိလာသော အချိန်တွင်ကား ….ယခု၂၀၁၀ ဒီမိုကရေစီ ကိုမဆိုလိုပါ…အခွင့်ရေးတိုင်းတွင် အဖုံးနှင့် ၊အဖွင့်ရှိကြစမြဲပါ…။၎င်း အတွက်ကြောင့် အယ်တီတာ နှင့်တကွ ၎င်းပိုစ့်တင် သူတိုအား အပြင်းအထန် ရှုံ့ချ လိုက်သည်….။
နာမည်မသိလို့ ဆူး လို့ပဲ သုံးနှုန်းလိုက်မယ်နော်… ကိုယ့်ထက် ကြီးလား ငယ်လားလည်း မသိဘူးဆိုတော့ ဆူးပဲ သုံးတော့မယ်… အဓိကပြောချင်တာက ဆူး ရေးထားတဲ့ ကွန်မင်းကို ပြောချင်တာပါ… ကျန်တဲ့သူတွေဟာလည်း အားလုံး ခြုံငုံမိအောင် ပြောပါမယ်… ပထမဦးဆုံး ဆူးပြောတဲ့ စာရေးတယ်ဆိုတာ မူကြို ကကြီး ခခွေး သိရင်ရေးလို့ရပြီးလို့ ပြောလိုက်ကတည်းက ဆူးရဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ အသိပညာ ဘယ်လောက်အထိ ရှိသလဲ ဆိုတာကို ကျနော်သုံးသပ်မိပါတယ်.. ဆူး ကိုပုတ်ခတ်တာ မဟုတ်ပါဘူးနော်… နောက်တစ်ခု စာရေးတယ်ဆိုတာ သေချာခိုင်လုံစွာ မသိပဲ လျှောက်မရေးရဘူးလို့ ဆူးက ပြောထားတဲ့အတွက် ဆူးအနေနဲ့ ဒီလိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှု ဒီ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်လောက်များ သိထားသလဲ ဆိုတာကို အရင်မေးစမ်းချင်ပါတယ်… ဆူး ပြောနေတာတွေ အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်ရသလောက်က ဆူးနဲ့တကွ ဒီမှာ ကွန်မင်းပေးထားသူတွေ အားလုံး မြင်ဖူး ကြားဖူး သိဖူး တွေ့ကြုံဖူးတဲ့ (ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အခြောက်တွေ မိန်းမလျာတွေ ဂန်ဒူးတွေပေါ့ဗျာ… ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က အတတ်နိုင်ဆုံး အားလုံးကို ခြုံငုံပြီးယဉ်ကျေးအောင်သုံးတဲ့ စကားလုံးက လိင်တူချစ်သူပေါ့) လိင်တူချစ်သူတွေက နတ်ကတော်လုပ်နေတဲ့သူတွေ ရှောက်သီးဆေးပြားရောင်းနေတဲ့သူတွေ လမ်းဘေးမှာ လိင်မှုကိစ္စကိုပဲ လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုပဲ တွေ့ဖူးလို့ဖြစ်မှာပါ… ကျနော်ပြောချင်တာက ဆူး က လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းကို ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင် အဲလိုမျိုး သူတပါးကို ပုတ်ခတ်ပြီးမှ ငါပြောတာ ငါအကုန်လုံးမှန်တယ်ဆိုပြီး မပြောရဘူးဗျ… ကိုယ်က လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းကို ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာမှာ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်အထိသိထားလဲ လေ့လာထားလဲ ဆိုတာကို အရင်အဖြေရှာကြည့်ရတယ်ဗျ… ပြီးတော့ ကျနော့်ကို ကျနော်လို့သုံးထားတဲ့အတွက် အသုံးအနှုန်းမှားနေတယ်လို့ပြောတာကိုပြောချင်တာ… တကယ်လို့ ယောက်ျားလေးတယောက်က ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းကြိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ မိန်းမစိတ်ပေါက်သွားတာ မဟုတ်ဘူးဗျ… လိင်တူချစ်သူတွေထဲမှာကိုမှ အမျိုးမျိုးကွဲလွဲကြသေးတယ်ဗျ… တချို့က ယောက်ျားအဖြစ်မွေးလာပေမယ့် မိန်းကလေးလို ၀တ်စားဆင်ယင်ပြီး သူတို့ကို သူတို့ မိန်းကလေးလို နေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေရှိသလို တချို့က သူတို့ကိုယ် သူတို့ယောက်ျားလေးပဲ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းပဲ ကြိုက်တဲ့သူတွေ အဲဒါအပြင် တခြားဟာတွေလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်… လောကကြီးမှာ လူတွေက ရေများရေနိုင် မီးများမီးနိုင် လုပ်ထားလို့ လူဦးရေရဲ့ လူနည်းစုလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေက ဖိနှိပ်ခံရတာတွေများနေလို့ ဒီလိုမျိုး ဆောင်းပါးတွေ စာတွေ ပေါ်လာရတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားတတ် မြင်တတ်မယ်ဆိုရင် သိပါတယ်ဗျာ… ကျနော်က ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ပါ… ဒါပေမယ့် ယောက်ျားလေးအချင်းချင်းကိုပဲ ကြိုက်တဲ့သူတယောက်ပါဗျ… ကျနော့်ကို မိန်းကလေးတယောက်လို လာဆက်ဆံရင် ကျနော်မကြိုက်ပါဘူး… ကျနော်က Gay ပါ… ပြီးတော့ ထူးချွန်တဲ့သူတွေထဲမှာ လိင်တူချစ်သူတွေ မရှိဘူးလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျား… ကမ္ဘာပေါ်မှာ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေ ထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့သူတွေထဲမှာ လိင်တူချစ်သူတွေက ထိပ်တန်းကနေ ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကို အမြင်ကိုကျဉ်းမြောင်းစွာမထားပဲနဲ့ အင်တာနက် ခေတ်ကြီးထဲမှာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လိုသလောက်ရနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာနေပြီး နောက်ကျကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်း မပြောလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျား… တကယ်လို့ လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိလိုတယ် ဆွေးနွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်ကို အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား… ဒါပေမယ့် လူသားအချင်းချင်း ရိုင်းဆိုင်းတဲ့အပြောအဆိုတွေ နှိပ်ချတဲ့အပြောအဆိုတွေ သူတပါးကို ဘာမှန်းမသိခင် အထင်သေးစော်ကားနေတဲ့ အပြုအမူအပြောဆိုတွေ လူအချင်းချင်း လေးစားမှုမရှိတဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုးကိုတော့ လက်မခံပါဘူးခင်ဗျား… တကယ်လို့ လိင်တူချင်း ချစ်သူတွေအကြောင်းကို တကယ်လည်း သိချင်တယ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ လူအချင်းချင်းကို လေးစားပြီး ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်မရွေး အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား… အားလုံးကို ခင်မင်လေးစားပါတယ်
လူသား အချင်းချင်း နိမ့်ချ ခွဲခြား ဆက်ဆံနေတာ မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းအရာကို သေချာ မလေ့လာဘဲ မရေးပါဘူး။ အတ္တကျော် စာအုပ်ကိုလည်း ဖတ်ပြီးတဲ့ စာအုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်တာ မဖတ်ရသေးတဲ့ စာအုပ် မဖတ်တဲ့ စာအုပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မဝေဖန်ဘူး။ ဂေးဆိုတဲ့ အသုံးက လိင်တူ ချစ်သူ ဆိုတဲ့ အသုံးထက် ပိုပြီး နားဝင်ချိုမလားဘဲ.. လူကို လူလို့ဘဲ သတ်မှတ်တယ်။ ဂေးဘဲ ဖြစ်ဖြစ်.. ကျားဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မဘဲ ဖြစ်ဖြစ်.. လူက လူဘဲ လူဆိုတာ လူတိုင်းမှ ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ ခံစားမှုတိုင်းကိုတော့ အများနဲ့ လိုက်လျောမညီလို့ မဖော်ထုတ်ရတဲ့ လူတွေ လောကကြီးထဲမှာ တပုံကြီးပါ။ ဂေးတွေ.. အချင်းချင်း ချစ်တတ်တဲ့ လူတွေထဲမှာ လူတော်တွေ အများကြီး ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆူးပြောခဲ့တယ် အရည်အချင်း ရှိတဲ့ လူဆို လူလောကထဲက ဘယ်သူမှ မထုတ်ပါယ်ဘူး။ အခု ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာ လိင်မှု ကိစ္စတွေကို ဖော်ထုတ်ပြီး ရေးသားမှုတွေကိုပါ။ တခြား စာတွေ ကို ကန့်ကွက်မှု တခုမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဖြိုး ကိုမွေးခဲ့တဲ့ အဖေနဲ့ အမေတောင် ဘယ်လို နေလို့ ဖြိုး ဆိုတာ ဖြစ်လာလဲ သိမှာပေါ့ ဖြိုးရဲ့ ညီလေး ညီမ လေးတွေ နောက်ထပ်ရလာဖို့ သော်လည်းကောင်း သူတို့ စိတ်ခံစားမှု အတွက်သော်လည်းကောင်း ဖြိုးရှေ့မှာတော့ ဖြိုးရဲ့ အဖေ အမေတွေ မြင်မြင် ရှင်းရှင်းကြီး ဖြစ်အောင် ဖော်ထုတ်မယ် မထင်ဘူး။ ရိုင်းမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူးနော်.. ဒီစကား.. ဖြိုး မိဘတွေကို စော်ကားတာ မဟုတ်ဘူး.. လူသဘာဝ ကိုပြောတာပါ။ ကျား နဲ့ မ တောင် ဟိုး နှစ်ပေါင်း များစွာ ကတည်း က အတူနေလို့.. လူသားတွေ ဖြစ်လာကြသေးတာဘဲ.. လူသား အစဉ် အဆက် ဖြစ်တည်အောင် နေထိုင်မှု တခုကို ဘယ်သူမှ လူအများ ရှေ့မှာ ဖော်ထုတ်တာ မလုပ်ဘူး။ သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ ဆိုတဲ့ အတိုင်း လူသားတွေ အရွယ်ရောက်ပြီး လူသားတိုင်း သိကြပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားသူ စိတ်ဝင်စား သလို စိတ်မ၀င်စား သူ စိတ်မ၀င်စား သလို နေကြတယ်။ ဒါကိုတော့ လက်ခံတယ်မလား။ ဒီသဘော အတိုင်းဘဲ လိင်တူချစ်သူဘဲ ဖြစ်ဖြစ်.. အခြောက်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်.. လူကတော့ လူဘဲ.. လူသားတွေ မှာ စောင့်စည်းအပ်တဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ ဆိုတာ ရှိတယ်။ လူမျိုးတိုင်းမှာလည်း မတူညီတဲ့ စည်းကမ်းတွေ ရှိတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ အသိနည်းသေးလို့ ဂေးတွေ အကြောင်း သိအောင် ဖော်ထုတ်နေတာနဲ့ မတူဘဲ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဂေးတွေ ဆက်ဆံတာ ဘယ်လို ဆိုပြီး ကြေညာနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ပထမဆုံး ပြောတဲ့ ကွန်မန်းလိုဘဲ.. လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ရှိတဲ့ အတွက် စိတ်ဝင်စားမှု တွေ အတွက် လေ့လာ ဆည်းပူးမှုတွေ များစွာ ရှိတယ်။ ကိုယ်သဘောကျပေမဲ့ သူများ သဘောမကျတဲ့ အရာတွေ ရှိတယ်။ ကျား မ ဆက်ဆံ တာ လူသားတွေ ဖြစ်တည်စေတဲ့ အဓီက အချက်ဖြစ်ပေမဲ့.. ကျားမ ဖီလင် တက်တဲ့ အကြောင်းတွေ သိချင်ရင် သိချင်တဲ့ လူတွေ ရှိတဲ့ နေရာကို သေချာရှာပြီး လေ့လာပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေ သိပ်ပွင့်လင်းတာမကောင်းဘူး။
လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်တဲ့ တခြားသော အကြောင်း အရာတွေကို ခင်ခင် မင်မင် ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ လူသားတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အမြင်တွေ ရှိတဲ့ အတွက် နေရာ တကာ လူတိုင်းနဲ့ ညီအောင် လိုက်ညှိနေဖို့ မလိုပေမဲ့ တချို့ ကိစ္စတွေမှာ လိုက်ရောညီထွေ နေရ တာမျိုးရှိတယ်။
Phyo တင်ပြတာကို ဖတ်ပြီး နားလည်ပေးလို့ ရပါတယ် ….
လူဆိုတာ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ရူးနေကြတာပဲလေ …. လွတ်လွတ်လတ်လတ် တင်ပြခွင့် ၇ှိပါတယ်
ကျန်တဲ့ သူတွေက ဘာလို့ရန်တွေ့ နေမလဲကွယ် …. ဟင်
ဆူး …ဆို တဲ့တစ်ယောက်က ဆရာကြီး လုပ်လွန်းတယ် .. နှုတ်သီးကောင်းလိုက်တာ
ကျန်တဲ့ သူတွေကလည်း ၀ိုင်းဟောင်လိုက်ကြတာ …. အဲလို ကိုက်ဖို့အချိန်တွေ ပေါနေကြသလားဟင်
Naywooni ဆို တဲ့ သူက လူလွန်မသားလို့သမုတ်ရလောက်အောင် အများသုံး စာမျက်နှာမှာ မိုက်ရိုင်းတယ် …
Admin Member များ ….. သတိပြုကြပါဦး
နောက်ဆို ဒီနေရာကနေ လှန် ပြမလားတောင် ထင်ရတယ် … စိတ်ပျက်စရာပါ
ပုရစ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း ဖြိုးနဲ့တကြိတ်ထဲ တညဏ်ထဲလို့ မပြောရဘူး၊ စရေးကထဲကိုက ဇာတိပြတယ်။ သူရေးတာ ဘာတဲ့ “လွတ်လွတ်လတ်လတ် ဖင်ပြခွင့် ၇ှိပါတယ်”
တစ်ကယ်တော့ တဘာဝပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ
listen Fuck u all of ur hole …
Hay Sai :
Fuck you man..
Don’t wanna fuck your ass hole …Hate of shit …
Firstly will break your tooth
Then .. Fuck your mouth … Ram & Ram & Ram
Finally …..Will pump into your fucking mouth with my white juice …
Gulp it down man ..
Understand !!! We can rude as ever as you can ….. Fuck you
မင်းကတော့ ကြောင်ကြီး ဆိုတဲ့အတိုင်း တော်တော် ကြောင်တာပဲကွာ ..
ကိုယ်ရေးထားတာ ” လွတ်လွတ်လတ်လတ် တင်ပြခွင့် ၇ှိပါတယ် ” လို့ရှင်းရှင်းလေး ရေးထားတာပါ ..
ဒါကို မင်းက ” သူရေးတာ ဘာတဲ့ “လွတ်လွတ်လတ်လတ် ဖင်ပြခွင့် ၇ှိပါတယ်” တဲ့ လား ….????
မင်း မြန်မာစာ မတတ်တာလား … ဖတ်လို့မမြင်တာလား …
ဒါမှ မဟုတ် သူများကို ပြောချင်ဇော နဲ့အမှန်ကို မမြင်နိုင်တော့တာလားကွယ် … ဟင်
ဒါမှ မဟုတ်ရင် … မင်းကိုယ်တိုင်က Naywooni ဆိုတဲ့လူလွန်မသားပြောသလို ဖင်အရသာတွေ့ ပြီး ဒါကိုပဲ ခံချင်နေလို့လား …. ဆိုးပါ့ ကွာ ..
မျက်စိ မကောင်လို့စာသားအမှန် မမြင်ရရင်လဲ မျက်မှန်လုပ်ဖို့စမ်းသပ်မှုခံယူလိုက်ပါ … ပိုက်ဆံမရှိရင် ကူညီပါ့မယ် … ဆီပုလင်းလေး ခါးချိတ်ပြီး လေးဘက်ထောက် နောက်ပြန်လေး လာခဲ့ ပါ … ကိုယ်ကတော့ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ် အနေအထားနဲ့စောင့် နေမယ် … မအော်ကြေး …. ( သြော် … Prick ဆိုတဲ့စကားလုံး အဓိပါယ်ကို နားလည်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါဦးလား ) … ဟိ ဟိ .
ပုရစ်ဆိုတဲ့သတ္တဝါရေ မင်းရေးထားတဲ့ ‘လွတ်လွတ်လတ်လတ်’ ဆိုတဲ့မြန်မာစာလုံးသတ်ပုံကို ပြန်စစ်ပါအုံးကွာ။ ပုရစ်ဆိုတဲ့အကောင်ကို အရင်ကထဲက ရွံလို့မကြည့်ခဲ့တာဆိုတော့ နားလည်ဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ပါဘူးကွယ်။
ဟား.ဟား… Prick ဆိုတာ ပုရစ် မဟုတ်ဘူး ငကြောင်ရဲ့..မင်း တော်တော် ညဏ် နဲသေးတာပဲ ..ထားပါလေ …
ဘာပဲပြောပြော မင်း ဆီပုလင်းခါးချိတ်ပြီး လေးဘက်ထောက် နောက်ပြန်လေး မလာရဲဘူး မို့ လား ….
ပြာသိုလမှာ ကြောင်မတွေ မိတ်လိုက်ပြီးရင် ဘယ်လို နေသလဲ … မင်းလက်တွေ့ခံစားချင်ရင် လာခဲ့လေ .. ကြောင် လီးပူ မိသလို လျှာပါထွက်ပြီး အော်သွားစေရမယ် ကိုယ့် လူ ….
ငါ စောင့် နေမယ် ….
ပုရစ်ရေ စိတ်ကလေးကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပါကွယ်၊ ကိုကြောင်ကြီးက ပုရစ်ကလေး စာတတ်ဖို့ သတ်ပုံပြင်ပေးတာကို အဲဒီလောက်တောင် စိတ်ဆိုးစရာမလိုပါဘူး။ မငိုနဲ့တော့နော် တိတ်တိတ်။ အော်ခုခေတ်ခလေးတွေများ တယ်ခက်ပါကလား။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ။
သတ္တများအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။ ပုရစ်ကောင်တော့မပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရွံလို့။